अमेरिकामा २ करोड मानिसमा कोरोना संक्रमण भएको खुलासा — Imandarmedia.com
१वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. जागेश्वर गौतम , यस्तो छ आरोप
अमेरिकामा २ करोड मानिसमा कोरोना संक्रमण भएको खुलासा
एजेन्सी । अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अमेरिकामा कम्तीमा पनि २ करोड मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेको अनुमान गरेका छन्। सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल(सिडिसी)ले संक्रमितको वास्तविक संख्या रिपोर्ट गरिएभन्दा १० गुना बढी हुनसक्ने बताएको छ। संक्रमित र सोका कारण अस्पताल भर्ना हुने बढेपछि टेक्सस राज्यले आफ्नो लकडाउन पूर्णरूपमा खोल्ने योजना फिर्ता गरेको बेला यो तथ्यांक आएको हो।
अमेरिकामा हालसम्म २४ लाख बढी मानिसहरूलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने १ लाख २२ हजार ३ सय ७० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकाका केहि दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यहरूमा पछिल्ला दिनमा कीर्तिमानी संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्। युनिभर्सिटी अफ वासिङटनले अक्टुबरसम्म कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ८० हजार पुग्ने जनाएको छ।
यसैगरी उसले ९५ प्रतिशत अमेरिकीहरूले मास्क लगाएमा भने सो संख्या १ लाख ४६ हजारमा सीमित हुनसक्ने जनाएको छ। हाम्रो अहिलेको उत्कृष्ट अनुमान अनुसार एउटा केस रिपोर्ट भइसक्दा १० जना संक्रमित भइसकेका हुन्छन्’, सिडिसीका निर्देशक डा. रोबर्ट रेडफिल्डले भने।
लक्षण देखिएकाहरूको मात्र परीक्षण गरिएकाले यस्तो भएको उनको भनाइ छ। ‘हामीले अपनाएको विधिबाट हामीले मार्च, एप्रिल र मे महिनामा हामीले सम्भवत: महामारीको १० प्रतिशत मात्र पहिचान गर्न सक्यौँ होला’, उनले भने। डा. रेडफिल्डले ५ देखि ८ प्रतिशत जनसंख्या भाइरसको सम्पर्कमा आएको बताउँदै अमेरिकीहरूलाई उनले सामाजिक दुरी कायम गर्न, मास्क लगाउन र हात धुन आग्रह गरेका छन्।
यस्तै भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितहरुको दैनिक संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको तथ्यांकले पनि एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएको देखाएको छ । अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा कोरोनाभाइरसबाट १७ हजार २९६ जना सङ्क्रमित भएका छन् ।
योसँगै भारतमा कोरोनाबाट कुल सङ्क्रमितको संख्या चार लाख ९० हजार ४०१ पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी कोरोनाकै कारण भारतमा अहिलेसम्म १५ हजार ३०१ जनाको मृत्यु भएको छ । ती मध्ये ४०७ जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको हो । मन्त्रालयले स्थानीय समयानुसार शुक्रबार विहान ८ बजेसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
उनीहरुले भारतमा अहिले पनि एक लाख ८९ हजार ४६३ जना सङ्क्रमित अवस्थामै रहेको जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी अरु दुई लाख ८५ हजार ६३६ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् ।
यो तथ्यांकअनुसार कुल सङ्क्रमित मध्ये ५८.२४ प्रतिशत विरामी सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । यसलाई सरकारी अधिकारीहरुले सकारात्मक संकेतका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका मध्ये सवैभन्दा धेरै महाराष्ट्र प्रदेशका रहेका छन् । महाराष्ट्र प्रदेशमा मात्रै एक दिनमा १९२ जनाको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय राजधानी समेत पर्ने दिल्ली प्रदेशमा ६४ जना, तमिलनाडुमा ४५ जना, गुजरातमा १८ जना, पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेशमा १५/१५ जना, आन्द्र प्रदेशमा १२ जना, हरियाणामा १० जना, मध्य प्रदेशमा आठ जनाको पनि पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार पञ्जाबमा सात जना, कर्नाटकमा छ जना, तेलङ्गनामा पाँच जना, राजस्थानमा चार जना र जम्मु काश्मिरमा दुई जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ